Sac - Wikipedia
Sac (Ingiriis: Cow) waa xoolo gurijoog ah oo dadku dhaqdaan. Sacu waa dhediga lo'da, halka dibigu yahay labka.
Sacu wuxuu ka mid yahay xayawaanka naasleyda ah ee ilmahooga nuujiya. Lo'da dhedig waxay leeyihiin 4 naasoo oo caano fiican laga helo, kuwaas oo loo isticmaalo siyaabo badan sida in la cabo, laga sameeyo subag, burcad, yoghurt iwm. Wadanada qaar, gaar ahaan dalalka saboolka ah, waxaa laga sacaha loo isticmaalaa in beeraha lagu qoto, wax lagu jiito, iyo la rartbo
Isku soo duuboo, lo'du waxay quudisaa shacabka aduunka ayadoo hilibkooda oo la cuno.
Wakhti laga joogo 10,500 oo sano, ayaa lo'da lagu dhaqan jirey koonfurbari dalka Turkiga. Intaas oo qarni oo ka dambeeysay lo'du waxay ku faafeysay dunida. In ka badan 1.3 bilyan oo lo' ah ayaa maanta ku nool daafaha dunida.
Guud ahaan, lo'du waa xoolo muhiim u ah aadamaha ayagoo laga helo hilib uu nafaqo ka helo jidhka dadku, dhogor laga sameeyo dharka, xadhkaha iwm. Intaas waxaa dheer, saxarada xoolaha laga helo waxaa lagu nafaqeeyaa carada.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sac&oldid=167128"
Last edited on 21 Febraayo 2017, at 14:17
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 21 Febraayo 2017, marka ee eheed 14:17.